Pakistan: Ciidamada oo weeraray Taliban - BBC Somali
Pakistan: Ciidamada oo weeraray Taliban
Image caption Ciidamada Pakistan ayaa qaaday weerar cirka iyo dhulka.
Militeriga dalka Pakistan ayaa sheegay inay bilaabeen hawlgal dhinaca dhulka ah oo ka dhan ah kooxaha la aaminsan yahay in ay ku gabanayaan North Waziristan, kaddib laba toddobaad oo weerarro dhinaca cirka ah ay socdeen.
Weerarkan ugu danbeeyay ayaa yimid saddex toddobaad kaddib, markii kooxaha xag jirka ahi ay weerareen garoonka dayaaradaha ugu weyn Pakistan ee ku yaal magaalada Karachi, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol qof.
Weerarkii dhimashada keenay ee garoonka Karachi ayaa loo arkay inuu noqday mid soo dadajiya dagaalkan, kadib weeraro sanado ka socday gudaha Pakistan oo ay fulinayaan mintidiinta kuwaas oo militariga ay u dulqaadanaayeen.
Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ayey ciidamada Pakistan ku qaadeen weeraro xagga cirka ah meelaha ay ku dhuumanayeen mintidiinta, oo ah gobalka waqooyiga Wazristan oo ay qabaa'ilka dagaan.
Bartilmaameedyada militariga ayaa waxaa ka mid ah mintidiina Uzbek iyo isbahaysigooda Talibaan, kuwaasi oo la sheegay inay ka dambeeyeen weerarkii Karachi.
Hadda militariga waxay sheegeen inay bilaabeen weerarka dhulka, iyagoo adeegsanaya ciidamada lugta meelo u dhaw dhaw Miranshah oo ah magaalada ugu weyn gobalka waqooyiga ee Wazaristan..
Taliyayaasha ciidamada Pakistan ayaa sheegay in aysan kala sooceynin waxa loogu yeeray Talibaanka fiican iyo kuwa xun, balse waxay wararka sheegayaan in waqooyiga Waziristan ay ka baxsadeen Mintidiin badan intuusan howlgaka bilaaban.
Duqeyn ka dhacday woqooyiga Pakistan
Taliban oo sheegatay weerarka Karachi
Weerar lagu qaaday garoonka Karachi